Xiaomi မှ Black Shark2စမတ်ဖုန်းဂိမ်း၏စျေးနှုန်းသည် ...
အစ » ထုတ်ကုန်များ » Xiaomi က Black ကငါးမန်း2smart ဖုန်းဂိမ်းတွေ
အစမိုဘိုင်းဖုန်းများစမတ်ဖုန်းများXiaomi က Black ကငါးမန်း2smart ဖုန်းဂိမ်းတွေ
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်ဖေဖော်ဝါရီလ 2020, 26 17:18 pm တွင်
စျေးနှုန်းသမိုင်း Xiaomi က Black ကငါးမန်း26.01 လက်မဂိမ်းစမတ်ဖုန်း 10GB 256GB က Black
€ 828,84 - 2020 24 ဖေဖော်ဝါရီ
€ 828,49 - 2020 17 ဖေဖော်ဝါရီ
€ 819,69 - 2020 11 ဖေဖော်ဝါရီ
€ 811,87 - 20204ဖေဖော်ဝါရီ
€ 806,40 - 2020 21 ဇန်နဝါရီလ
€ 807,83 - 2020 18 ဇန်နဝါရီလ
€ 804,24 - 20206ဇန်နဝါရီလ
€ 810,80 - 2019 23 ဒီဇင်ဘာ
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း: € 897,99 - 2019 13 ဇွန်လ
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း € 793,55 - 2019 12 ဇွန်လ
Xiaomi က Black ကငါးမန်း26.01 လက်မဂိမ်းစမတ်ဖုန်း 10GB 256GB က Black
Xiaomi က Black ကငါးမန်း Helo 6.01 လက်မ 4G စမတ်ဖုန်း (8GB 128GB 12 + MP / MP Snapdragon 20 845 4000 ...
Xiaomi က Black ကငါးမန်း26.01 လက်မဂိမ်းစမတ်ဖုန်း 8GB 128GB က Black
Xiaomi က Black ကငါးမန်း26.01 လက်မဂိမ်းစမတ်ဖုန်း 6GB 128GB က Black
Xiaomi က Black ကငါးမန်း26.01 ဂိမ်းစမတ်ဖုန်းတွင် Snapdragon 845GB 10GB 256 12.0 20.0 + 8.0MP က Android ...
Xiaomi က Black ကငါးမန်း26.01 ဂိမ်းစမတ်ဖုန်းတွင် Snapdragon 845GB 8GB 128 12.0 20.0 + 8.0MP က Android ...
Xiaomi က Black ကငါးမန်း26.01 ဂိမ်းစမတ်ဖုန်းတွင် Snapdragon 845GB 6GB 128 12.0 20.0 + 8.0MP က Android ...
Xiaomi က Black ကငါးမန်း2HELO လုပ်ဆောင်ခြင်း!
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: Xiaomi က Black ကငါးမန်း2smart ဖုန်းဂိမ်းတွေ
Operating System ကို: ရွှင်လန်း UI ကို (အန်းဒရွိုက် OS ကိုအပေါ် 8.0 အခြေစိုက်စခန်း) CPU ကို: Qualcomm Snapdragon 845, Octa-core, 2.8GHz GPU ကို: Adreno 630, ရမ်: 8GB, ROM ကို: 128GB, တိုးချဲ့သိုလှောင်: N / A
screen အမျိုးအစား: capacitive Screen, screen အရွယ်အစား: 6.01 လက်မ, screen resolution: FHD + (က 2160 1080 pixels) မျက်နှာပြင် display ကို
ကြိုးမဲ့ connectiveity: ဂျီအက်စ်အမ် 3G, 4G, GPS Wi-Fi, Bluetooth ကြိမ်နှုန်း: ကွန်ယက်အဖွဲ့: 2G ဂျီအက်စ်အမ် B2 /3/5/ 8, CDMA / EVDO BC0, 3G: B1 WCDMA /2/5/ 8, TD-SCDMA B34 / 39, 4G: FDD-LTE ကို B1 /3/4/5/7/ 8 / 20, TDD-LTE ကို B34 / 38 / 39 / 40 / 41, ဘလူးတုသ်: ဟုတ်ပါတယ်, 5.0, Wi-Fi: ဟုတ်ပါတယ်, 802.11 /b/ g / n / ac GPS စနစ်ဟုတ်ပါတယ်, GPS စနစ် / AGPS / GLONSAA / beide
ကင်မရာအမျိုးအစား: Dual-ကင်မရာများ (တဦးတည်းမျက်နှာစာနှစ်ခုပြန်), နောက်ကျောကင်မရာ: 12.0MP + 20.0MP ရှေ့ကင်မရာ: 20.0MP ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်: ဟုတ်ကဲ့
SIM ကဒ် slot ပါ: Dual-Nano SIM ကဒ်ကို dual standby, TF ကဒ် slot ပါ: N / A ကို USB အထိုင်: Type-C အသံ output ကို: ဟုတ်ကဲ့ (ပါးစပ်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါအားသွင်း) မိုက္ကရိုဖုန်း: ထောက်ပံ့, နာယက: ထောက်ပံ့
ဗီဒီယိုကို format နဲ့: 3GP, MP4, RMVB ပေး Audio format နဲ့: WAV, AMR, MP3, Image ကိုကို formats: GIF, JPEG, BMP, PNG, FM ရေဒီယို: N / A
4G, WIFI, GPS, Bluetooth စလက်ဟန် Sensing, စမတ်နိုး, eBooks, Email, Messaging ကို, နောက်ခံပုံများ, ပြက္ခဒိန်, ဂဏန်းပေါင်းစက်, နာရီ, ကင်မရာ, လံကြိုး & ခရီးဆောင်ဟော့စပေါ့, Touch ကို ID ကိုမြန်ဆန်တာဝန်ခံ, Type-C, etc
Dimension: 160 75.25 * * 8.7mm, အလေးချိန်: 190g
ဖုန်း× 1, 1, ဘက်ထရီ, 1 × Type-C cable ကို, 1 ×ဖြစ်ရပ်မှန်, 1 ×ဂိမ်းဆော့ခလုတ် In-Built 1 ×ရုပ်ရှင်ပွဲတော်, 1 eject ပင်, 1 ×အသုံးပြုသူလက်စွဲစာအုပ် x, 1 အမေရိကန်ပါဝါ Adapter ကို (ကညာဘက်ကို AC အဒပ် x × ) သင့်ရေကြောင်းတိုင်းပြည်အဖြစ်စေလွှတ်တော်မူလိမ့်မည်
Xiaomi က Black ကငါးမန်း2စမတ်ဖုန်းကိုဗီဒီယိုဂိမ်း
"ဒီထုတ်ကုန် Xiaomi က Black ကငါးမန်း2စမတ်ဖုန်းကိုဂိမ်းဘယ်လောက်ရှိသလဲမှပထမဦးဆုံးဖြစ် ပြန်ကြားချက် Cancel
UMIDIGI S2 Pro ကိုဖုန်းမှ (6GB RAM ကို, ROM ကို 128GB,6လက်မ)